JAAMICADDA CARABTA IYO SOMALIA!!
AQALKA FASHALKA.. XAAJADA LA GEEYA SOO FAASHAL MAAHA??
Dr. Abdi Dhaan-Wade . SWEDEN.
Waxaa dad badani rajo ka muujiyeen dhexaadinta jaamicadda Carabta ee Dawladda somalia iyo maxkamadaha muqdisho ee magaalada khartuum.
Dadkaas rajado ka muuqatay Waxaan ku tilmaami karaa laba nooc midkood:
1-In ay yihiin kuwa aan la soconin Xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan tahay Jamicadda iyo dawladaha xubnaha ka ah.
2-Ama kuwo dhibaatoyinka dadka Somalida haysta muddada dheer la sirinsirqoobay oo ku haftay fatahaadda musiibooyinka aan kala go’a lahayn markaana iyaga oon waxba hubsanin sharqantii yeertaba gacant u hadinaya. Kuwaas oo ay ku dhabawday murtidii ahayd: ” Nin daad qaaday xunbo cuskay ”
Waxaan qoraalkaan ku soo bandhigayaa Xaaladda Jaamicadda Carabta iyo dawladaha xubnaha ka ah. Kaddibna waxaan dul-marayaa mawqifka dawladahaasi ee ku Aaddan Somalia 16kii sano ay jirtay Qaran-jabka,burburka iyo baabba’a. Waxaana ku gunanadayaa sababaha Carabta iyo war-baahintoodu durbaanka ugu garaacayaan Maxkamadaha muqdisho iyada oo la wada ogyahay waddamada Carabta Qofkii ama kooxdii laga Maqlo Xukunka Shareecada.Islaamka aragtiga lagu toogto!!.
Waxaanse intaas oo dhan ka horraysiinaya hor-dhac la xiriia Jaamicadda nafteeda oo aan si kooban ugu soo qaadayo dhuruuftii dhalisay asaaskeeda, qaab-dhesmaadkeeda, wax-qabadkeeda muddada ay jirtay, Kaalinta ay kaga jirto Siyaasadah Dawliga ah ee waqtiga la joogo iyo waliba sida loo arko mastaqbalkeeda,
Jaamicaddu waa Urur-goboleed ku dhisan qawmiyadd ama jinsiyadd gar ah ( Ethnic) oo ka midd ah jisuyadaha Banii Aadamka ee ku nool arlada . Oo ah qawmiyadda dadka Carbta ah.
Si aan fikrad ugu siiyo dad Somaaliyeed oo aan intooda baddani maqal mooye eh aqoon fiican u la hayn Jaamicadda Carabta ayaan waxaan si kooban idiin ku soo xusayaa Macloomadka asaasiga ah ee uu u baahanyahay qof kasta oo doonaya in uu wax fahmo Jamicaddu, waxa ay tahay, waxa ay gasho iyo waxa ay guddo.. Waan kan:
1- ASAASKEEDA :
Waxaa la asaasay Jaamicadda horaantii 1945kii. Sidaas ayay ku tahay tan ugu da’wayn ururada Caalamiga ah iyo urur goboleedyad maanta dunida ka jira. Waxay ka horasay Qaramada midoobay oo la Asaasay dabayaaqadii 1945kii. Waxaa kale oo ay ka da’wayn tahay urur-goboleedyada Adduunka maanta jira dhaamaantood sidaa kan Afrika, Amerika, Europ iyo Aasia.
Jaamicadda waxaa dhidibada u taagay oo xubno ka noqday toddoba dal oo waagaas haystay Madax-bannaani. Inta kale ee Caalamka carabto waxay ku hoos jireen gumaysiga reer Europ. Jaamicadda waxaa maanta xubno ka ah 21 dal marka laga reebo Somalia iyo Falastiin.
Cahdiga ( Charter) Jamicadda lagu dhisay waxaa ku cadd in ulajeeddadeeda ugu wayn tahay sidii loo midayn lahaa oo hal dal looga dhigi lahaa Umadda Carabta oo dhan . Inta midnimadaas laga gaarayana in ay tahay Jaamicaddu hooyga ay isugu keenayaan ISKAASHIGA xubnoho ee dhinacyada Siyaasadda, Dhaqaalaha, Difaaca iyo hor-u-marinta bulshada.
Inkasta oo ay Arimahaas ku cad yihiin Cahdiga, haddana waxaa taariikh ahaan la ogyahay in ay jireen ula-jeeddooyin qarsoon oo ka turjimayay duruuftii markaas ay ku sugnaayeen Shucuubta Carabto iyo dunida muslinka.
Haddaan hoos ugu daadago, waxaa la ogyahay in fikradda Jaamicadda Carabta ka danbeesay dawladda Ingiriiska oo markaas awood ballaaran iyo saamayn siyaasadeed ku lahayd gobolka bariga-dhexe.oo idi
3- JAAMICADDA ISLAAMKA:
Waqtigaas oo ahaa dhamaadkii dagaal-waynihii labaad ee dunida, waxaa socotay Afkaar kala duwan oo mufakiriinta Caalamka Islaamku ku taamayeen taas oo ah sidii loo heli lahaa Nidaam-siyaasadeed oo xaqiijiya DALLADD ay wada harsadaan dhammaaan shucuubta Islaamku. Kaas oo CIWEL-CELIN u noqda Mslimiinta markii la baabbi’iyay Nidaamkii Khilaafaddii Islaamka ee CUSMAAIYIINTII Turkiga ahaa.
Mufakiriin ka tirsana Caalamka Islaamka oo ay hormuud u ahaayeen JAMAALU-DDIIN AL-AFGAANI (1837-1897 ) iyo MAXAMEDD CABDOO (1849-1905 ) ayaa u ololaynhayay in la asaaso JAAMICATUL-IALAAMIYA oo kulmisa dhammaan shucuubta Islaamka oo u baddesha Khilaafadii Cusmaaniyiinta oo waqtigaas dulsaaarayd sariirta dhimashada iyada oo loogu magac daray ” NINKII BUKAY ”. Kaddina la soo afjaro 1923kii. Dhamaadkii Dagaalkii kawaad ee dunida. Markii lagu jabiyay isbahaysigii ay Turkigu ka midd ahaayeen.
Waxaana fikraddii Jaamicadda Islaamka halkii ka amba-qaaday Ardaardadii labada Imaam ee aan magacooda soo xusay iyo dhaq-dhaqaayo aqoonyahanno u badan oo ku faafiyay Caalam Islaamka oo dhan..
Boqoradii Dalka MASAR ee kala danbeeyay ” Fu’aad -Faaruuq” ayaa ka midd ahaa Taageerayaasha AL JAAMICA AL ISLAAMYA iyaga oo u hanqal-taagayay in ay noqdaan madaxa Jaamicaddaas. Magaalada QAAHIRANA noqoto Caasimadda KHilaafadda Islaamka ee cusub.
Ingiriiska oo aad u diidanaa fikraddaas Islaamiga ah ayaa si ay isu hortaagaan Jaamicadda Islaamka waxay soo hindiseen Fikradda Jaamicadda Carabta.. Sidaas ayayna ku hirgashay fikraddii Ingiriisku. Jamicaddii Islaamkana loo xabaalay iyada oon weli dhalaninba.
4- QAAB-DHISMEEDKA JAAMOCADDA.
Qaab-dheesmeedka Jaamicadda Carabto waxuu ka tarjamayaa fikraradihii loo asaasay ururka. Oo ahaa inay noqoto Weelka is-kaashiga dalalka carabta marka hore iyo waddada loo marayo midaynta dalalkaas marka danbe.Waxay leedahay qaab-dhismeed shabbaha kan UNka.Waanaa sidan isaga oo kooban:
A- GOLAHA JAAMICADD ama majliska Jaamicadda. Waana hay’adda ugu saraysa ee ururka. Wuxuuna qaabilsanyahay arimaha Siyaasadda. Majilsku wuxuu ka koobanyahay Wasiiradda arimaha dibada ee dalalka xubnaha ka ah. Wuxuuna shirar isgu imaanaya sannadkiiba laba jeer. Guddoonka Majlisku waa midd meerta ah. Oo dal walba wuxuu haynayaa muddo 6 bilood ah..
Go’aannada goluhu waxay ku ansaxayaan marka ay dhammaan xubnuhu is-raacaan oo qur ah. Xarunta ururku waa magaalada Qaahira ee Masar.Haddii la isla gartana majlisku wuu ku shiri karaa meel kale.
Waxayna ka kooban tahay Xoghayaha Guud oo madax u ah iyo hawl-wadeenno la shaqeeya. Qaybtani waxay mas’uul ka tahayn hawl-maalmeedka ururka, daba-galka fulinta go’aannadiisa iyo is-ku-duwidda hawlaha laamaha kala duwan ee Ururka. Waxaa kale oo xoghaynta guud ay mas’uul ka tahay xiriirka ay Jaamicaddu la leedahay dalalka Caalamka iyo ururada Caalamiga ah iyo urur-goboleedyada iyada la midka ah,,iwm.
C- GOLAHA WAKIILLADA:
Dawladaha ku jira Jaamicadda waxaa mid walba u fadhiya Waliil ( Manduub). Wakiilladani waxay kulmaan inta dhaxaysa labada Kal-fadhi ee majliska Jaamicadda. Waxaana la isugu-yeeraa mar kasta oo loo baahdo. Waxaana isugu-yeeri kara Xoghayaha Guud ama dalab ka yimidd mid ka mid aha wakiilada dalalka xubnaha ah.
D- GOLAHA DHAQAALAHA IYO BULSHADA:
majliskani wuxuu qaabilsanyahay Dejinta iyo fulinta qorshayaasha dhaqaale iyo bulsho ee dalalka carabta iyo sidii waddamadaas looga hormarin lahaa dhanacyada shaqaalaha iyo arimaha bulshada. Golahan waxaa loogu tala-galay in uu isku-dubba-rido dhaqaalaha xubnaha isaga oo adeegsanaya qaabka iyo habka xaqiijinaya dhaqaale isku-dhafan oo is-kaamila iyada oo la tix-gelinayo waxa dal kasta ku habboonyahay iyo khayraadka Dabiiciga uu dal kasta leeyahay. Si loo gaaro dhaqaale isku-dheelli-tiran oo ku salaysan is-kaamilidd iyo isku-fillaansho dhinc kasta ah.
E- LAAMAHA GAARKA AH:
Waxay leedahay Jaamicadda Laamo ku takhasusay Majaallo gaar ah. Sida laanta: Wax-barasha, culiimta iyo hidaha oo loo yaqaan ALESCO waxayna u dhigantaa Uneskada UNka. Waxaa kalr oo laamahaas ka midd ah kuwo kala qaabilsan caafimaadka, Is-gaarsiinta shaqada, Cilmi-baarista iyo qaar kale .
F- URURADA SHAQAALAH IYO XIRFADLAYDA:
Waxaa iyana ku xiran Jaamicadda Ururo ay leeyihiin shaqaalaha iyo xirfadd-layda Carbeed. Sida Ururka Xoogsatada-Carbeed. Ururada jaamicadaha, gar-yaqaanada, dhakhaatiirta, dhaqaal-yahannada, Saxafiyiinta, Qoraayada, macllimiinta, hawaynka, ardada….iwm. .
Waxaa intaas dheer Wakiillo ama Dan-jirayaal ay Jaamicaddu u dirsato Ururada Caalamiga ah iyo kuwa Goboleed iyo weliba waddamada qaakood. Wakiilladaas ( Manduub) oo ka fuliya hawlaha iyo siyaasdaha Jaamicadda ee ku Aaddan ururadaas iyo dalalkaas. Wakiilladaan waayahan danbe tiradooda waa la soo yareeyay safaarado iyo xafiisyo Jaamicaddu meelo badan ku la haydna waa la soo xiray.
G- SHIRARKA MADAXDA DAWLADAHA:
Kulamada Boqorada iyo Madax-waynayaasha Carabto oo loo yaqaan Al-qimma ( Sumit) ma ah Hay’add ku xusan Cahdiga ururka. Laakiin dagaalkii dhexmay Carabta iyo Israel 1967kii kaas oo loo yaqaan DAGAALKII LIXDA CASHO ee Carabta lagu jabiyay Yahuudduna ka qabsay Masar, Suuriya iyo Jordania dhul aad u ballaaran oo dhawr jeer ka wayn Dhulkii Israel ee dagaalka ka hor, ayaa Madax-waynihii Dalka Masar Jamaal Abdinaassir wuxuu madaxda dalalka Carabta markii ugu horaysay isugu yeeray Shir-madaxeed lagu qabtay Magaalada khardduum ee Sudaan. Si looga tashado mashaqada jabku keenay.
Shirkaas oo ku caan baxay Shirkii SADDEXDA MAYA. Magacaas oo laga soo xigtay Saddexdii : LAA. LAA. LAA ee astaanta u ahaa go.’aanada shirkaas.
Taas oo macnaheedo yahay: MAYA, MAYA iyo MAYA.
Haddaan sii caddeyo waxay go’aannadaasi ahaayeen: Maya in Israel aan la Xaajoonno. Maya in aan Israel la heshiino. Maya in aan Israel aqoonsanno.
Intii waqtigaas1967kii ka danbaysay Dawr jeer ayaa la qabtay shirar madaxeedyo teel-teel ah.
Shir-madaxeedkii Bayrut ee Lobanaan 2002dii aya lagu heshiiyay in shri-madaxeedyada dalalka jjaamicadda la joogteeyo sannadd walba.
5- WAX-QABADKA JAAMICADDA!!.
Waxaa marag ma-ddoonta ah in qaabka ay Jaamicaddu u dhisan tahay oo yahay midd aad u qurxoon, oo ka marag kacayaa in ay dejiyeen aqoon-yahanno ku xeel-dheera arimaha sharciga, culuumta siyaasadda, dhaqaalaha iyo arimaha bushada. Waxaa kale oo la oran-karaa Raggaas garashadoodu way ka horaysay waaqicii iyo duruufihii uu ku jiray Caalmka Carabto. Waqtigaas oo hadda laga joogo in ka badan 60 sano..
Waxaa iyana xusidd mudan in shucuubta-carbeed ay dul-saartay ididiilo aan xadd la hayn Jamicadda oo u arkahayeen in ay ka tarjamayso dareenkooda Qawmiyadeed ee ku salaysan midnimada Afka, Diinta , Taariikhda, Hiddaha iyo Dhaqanka
Waxaa kale oo ay Dadyawga Carbeed u arkayeen Jaamicadda waddadii Mustaqbalka ay ku gaari la haayeen soo celinta midnimada Umadda Carbeed ee gumaysiga reer Europ kala qaybiyay kalana qoqobay.
Waxay u arkayeen in haddii ay waayeeen hadafkii waynaa ee midaynta umadda Islaamka in ay helaan ugu yaraan Carab midaysan.
Waxaase muhim ah in la is-waydiiyo Jaamicaddu ma xaqiijiyay ula-jeeddooyinkii iyo ahdaaftii ay ku taamayeen Asaasayaasheeddii dhibada u aasay muddadaas kor u dhaaftay lixdanka sano iyo himiladii dadyawga carabto u qabeen? Cimrigaa dheer ay Jamicaddu soo jirtay ilaa heerkee ayay ku guulaysatay in ay u horseeddo Umadda Carabta Xaqiijinta mabda’a ugu waynaa ee loo dhisay oo ah in la gaarsiiyo Carabta Midnimo siyaasadeed, difaac iyo hor-u-kac dhaqaale iyo bulsho oo ku yimaadda is-kaashi iyo middnimo?.
Jawaabta oo koobani xaqiiqo ahaan waa mid kharaar. Oo waa maya!!
Waxaan oran karaa Jaamicadda waxay jirtaa 60 sano oo GUUL-DARRO iyo FASHAL dhinac walba ah ayaa hareereeyay.
Lixdankaa Sano waqtiba waqtiga ka danbeeya ayay Jaamicadda Carabto iyo dawladaheedu ka sii fagaanayeen kana sii durkayeen is-kaashigii iyo midnimadii loo asaasay Jaamicadda.
Laga soo billabo fashalkii dagaalkii 1948 kii ee dalka Falastin Yahuuddu ku qaadatay ilaa iyo fashalka maanta oktobar 2006 da ee Jamicadda Carabto iyo xubnaheedo ku Fashileen shirkii Kharttuum ee dhex-dhexaadinta Dawladda Somalia iyo maxkamadaha Muqdisho, Jaamicaddu fashalba fashal ayuun bay uga sii gudbayeen. ilaa loogu magac-daray AQALKII-FASHALKA.
Waxaa yaab iyo tacajub ah oo aan qofna laga dhaadhicin karin in lixdan sano ka hor uu is-kaashiga Carabto ka fiicnaa boqolaal jeer heerka uu maanta ku sugan yahay. Iyo in midnimada Ummadda Carbeed lixdan sano ka hor ay ka dhowayd kan rajo wanaagsanayd boqolaal jeer heerka ay maanta taagan tahay!!
Sabaha Fashalkaan u horseeday Jaamicadda waxaan ku soo bandhigi doonaa qormada soo socota haddii Alle yiri.
Waa : Dr. Abdi Dhaan-Wade . SWEDEN.
Qoraaladii hore ee Abdi Dhaanwade
Faafin: SomaliTalk.com | Nov 23, 2006
Batroolka Dad-u-dhexeeyaha: Deegaanka maxalliga, Nidaamka-Islaamiga, iyo Adduun-weyne... Akhri..
Tallaabada la filan karo in uu Golaha Ammaanku ee Qaraamada Midoobey uu ka qaato Soomaliya.. Akhri